Ngathi-I-Hebei yoBungqina-obuSekwe kwiTekhnoloji yoNyango Co., Ltd
Impilo yonke kumatshini omnye xz2010-106, i-meridian analyzer Wall ifakwe kwinkqubo yokuxilonga ngokubanzi, i-wfk Ukuxilongwa ngokubanzi kweNkqubo yezoNyango yamaShayina, inkqubo yovavanyo lwezempilo ye-HRE eyi-12 yovavanyo lomzimba, ulawulo lokuhlolwa komngcipheko wabasebenzi Abasebenzi abagciniweyo boovimba kunye nemodeli yedatha enkulu.
I-Xz2010-106, iswekile yomthi weswekile yegazi:
Ngaphambi nasemva kokutya, i-glucose yegazi, uxinzelelo lwegazi kunye novavanyo lweoksijini yegazi. Idatha ingxelo yexesha lokwenyani, isondlo esikwi-Intanethi sikhuphe iNkqubo yokutya okunempilo.
Impilo yonke kumatshini omnye xz2010-106, iwotshi ebukhali ebukrelekrele, iXikang Xinxibao: (ukulala, ikhaya) uvavanyo lomzimba oluqhelekileyo, ukubeka esweni okwenyani kwezigulanaIimpawu zeVital, ukubuya kwedatha, - umnxeba ongxamisekileyo we-SOS.
I-X8 iwotshi yesihlahla esikrelekrele, i-electrocardiograph ye-ambulensi Xikang xinxinbao: (ngaphandle) Ukujonga ixesha lokwenyani kweempawu ezibalulekileyo, ukuthintela izifo ezingapheliyo; Ukubuya kwedatha ngexesha lokwenyani, ukubeka esweni ixesha lokwenyani. Ukucofa umnxeba ongxamisekileyo we-SOS, oogqirha, amalungu osapho ekubekeni iliso kwi-Intanethi kunye nokubeka indawo.
I-Wfk TCM inkqubo ebanzi yokufumanisa isifo, inkqubo yovavanyo lomngcipheko we-HRE, iqonga lefu le-AI Iingcali ezidumileyo zinxibelelana kwi-intanethi ngexesha lokwenyani, Ukuhlaziywa kwexesha lokwenyani koovimba bekhompyuter kunye nokunikezelwa kwedatha enkulu Iimpawu ezibalulekileyo, ukhokelo lwamayeza kunye nohlalutyo lokunganyangeki ngamachiza. .
Isiphelo esikrelekrele, ijelo lokudluliselwa okuluhlaza: Isibhedlele iXuanwu, isibhedlele seManyano yaseKholeji yezoNyango, intsebenziswano yeHierarchical ekuchongeni nasekunyangeni. (uvavanyo, ukubeka iliso, unyango ngongenelelo kulawulo lwempilo) Izixhobo zonyango zezibhedlele ezintathu eziphezulu e-China Unyango lwangaphandle kwezonyango, njl.